people Nepal » सेक्स गरे लगत्तै पिसाब फेरेमा गर्भ रहन्छ की रहदैन? सेक्स गरे लगत्तै पिसाब फेरेमा गर्भ रहन्छ की रहदैन? – people Nepal
सेक्स गरे लगत्तै पिसाब फेरेमा गर्भ रहन्छ की रहदैन?
यौन रोग र एचआईभीको संक्रमणबाट बच्न कन्डमको नियमित तथा सही प्रयोग अनिवार्य छ । सुरक्षित कालबाहेक अरू समयमा यौनसम्पर्क नै गर्नु हुँदैन वा कन्डमजस्ता साधन प्रयोग गर्नुपर्छ । यसै अनुसन्धानबाट प्राप्त केही तथ्यहरुका अनुसारः